Kheyraadka: 11 Jees jees ah oo loogu talagalay aqoonsigaaga shirkadda | Abuurista khadka tooska ah
La aqoonsiga shirkadaha Mashruucu wuxuu ka kooban yahay dhammaan walxaha dibedda ee ka kooban shakhsiyaddiisa. In kasta oo xaqiiqda ah in marka laga hadlayo aqoonsiga shirkadeed macaamiisha badankood ay ka fekeraan astaan, waxaa jira waxyaabo kale oo badan oo laga yaabo inay iska leeyihiin (baakadaha, naqshada gudaha ee dukaanka, muusikada la isticmaali doono, carafta ...).
Dhammaan walxaha jireed ee qayb ka ah aqoonsiga shirkaddu waa inay noqdaan joogteynta joogtayso iyo ixtiraam qiyamka cilmi nafsiga ugu badan ee mashruuca: falsafadiisa, qiimaheeda kala geddisan, xooggiisa (iyo daciifnimadiisa), suuqa ay ku taal, macaamiisha loogu talagalay ... Markaad tan si aad ah u hesho, waxaad diyaar u noqon doontaa inaad bilowdo nashqadeynta. Oo markii wakhtigu yimaado, halkan waxaa ah 11 jeesjees ee ugu wanaagsan aqoonsigaaga shirkadda. U soo bandhig si xirfad leh oo hubi inaysan ku siin karin jawaab la'aan.
Intaadan arkin ka jeesjees, waxaan ku siineynaa seddex talooyin oo aasaasi ah oo waxtar yeelan kara marka la sameynayo walxaha ka kooban aqoonsigaaga:
Tixgeli miisaaniyada markay tahay midabada mari. Hadday yar tahay, ku isticmaal midabada ugu yar ee suuragalka ah astaanta iyo daabacadaha. Waxa aad sameyn kartid ayaa ah kala duwanaanta mugdiga midab isku mid ah si loo gaaro codad kala duwan (sidan oo kale, daabacaadda ayaa ka jaban doonta).
Tixgeli miisaaniyada markay tahay walxaha naqshadeynta. Maaha isku mid aqoonsigaaga shirkadeed wuxuu adeegsadaa walxaha aasaasiga ah (kaararka ganacsiga, warqadda, baqshadda) ama wuxuu ka kooban yahay qaybo badan oo ka kooban (walxaha aasaasiga ah + shaabad gaar ah, baakadaha, istiikarka, qalimaanta, qalin, dharka ...) .
Abuur a astaan ​​la aqoonsan karo oo soo jiidasho leh. U soo gudbi xukunka in ka badan seddex qof oo kala duwan oo fiiro gaar ah u yeelo waxa astaantu u gudbinayso iyaga: haddii ay u dhigantaa qiimahaaga astaanta, taasi waa fiican tahay.
Jeesjeesyada aqoonsigaaga shirkadda
Aqoonsiga shirkadeed 2
Aqoonsiga shirkadeed 3
Aqoonsiga shirkadeed 4
Boosto leh qaab
Astaanta Hard hit
Logo oo lagu shaabadeeyey khad dahab ah
Logo lagu shaabadeeyey khad dahab ah 2
Logo oo lagu shaabadeeyey khad qalin ah
Astaanta Vinyl daaqadda
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » 11 jees jees ah oo loogu talagalay aqoonsigaaga shirkadda